I-pixel kaGoogle yomhla wokukhutshwa kwe-6, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Umhla wokukhutshwa kukaGoogle Pixel 6, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Xa kuziwa kukhupho lwe-smartphone uphando ayaziwa ncam ngokukwazi kwayo ukugcina imfihlo. IPixel 5 iseyinto entsha kodwa ukuvuza malunga nomntu oza kungena ezihlangwini zakhe sele bekhukula indawo ekwi-Intanethi. Kubonakala ngathi iGoogle & apos; s imephu yendlela yesixhobo esihambileyo sele ivuza kwaye ngoku iiapos zijikeleza ngeenxa zonke kwiwebhu, zenza i-hype kunye nefuthe le-rumor mill. Ngaba i-Pixel 6 iya kuba yiflegi yokwenyani? Kuthekani ngamarhe Ifowuni yePixel enokusonga ?
Iflegi kaGoogle Pixel 6 kunye nePixel 6 Pro evuzayo yoyilo olutsha Imifanekiso yamatyala e-5G Pixel 6 kunye nePixel 6 Pro yokuhanjiswa kweefowuni ezintsha Intsha yePixel 6 kunye ne-5a amahlebezi: Ukusebenza kwe-Whitechapel chip, umbala oluhlaza, kunye nexabiso
Kukho amagama amathathu ekhowudi akhankanyiweyo kuxwebhu oluvuzekileyo- 'igwababa,' 'oriole,' kunye 'nepasipoti.' Siyakholelwa ukuba 'igwababa' kunye 'ne-oriole' inokuba yiPixel 6 kunye nePixel 6 XL, ngelixa 'ipasipoti' inethuba elinomdla lokubona isixhobo esongekayo esinophawu lukaG kuso. Ewe kunjalo, okwenyani okanye akunjalo, imephu yendlela yinto engaqinisekanga kwaye ivulekile kwindalo yayo, ke thabatha lonke ulwazi ngengqolowa yetyuwa esempilweni.
Nangona kunjalo, siqokelele yonke into esiyaziyo malunga nePixel 6 kunye nezicwangciso zikaGoogle kunye neapos zika-2021. Masikhe singene ngaphakathi!
Ixabiso leGoogle Pixel 6
Umhla wokukhutshwa kweGoogle Pixel 6
Ukucaciswa kukaGoogle Pixel 6
Uyilo lweGoogle Pixel 6 kunye nokuBonisa
Ikhamera yeGoogle Pixel 6
Ixabiso leGoogle Pixel 6 yenye yezona zinto zinomdla wokucinga ngazo. UGoogle uphume konke ngePixel 4 kunye ne-4XL ebetha ixabiso leeflegi kwezi modeli (iPixel 4XL 128GB ixabisa i $ 999) kodwa emva koko inkampani yabuya umva IPixel 5 , iyenza into yefowuni ephezulu ekumgangatho ophakathi enethegi yexabiso engama- $ 699.
Ngokucacileyo zimbini iindlela ezingaphambili malunga nexabiso lePixel 6. UGoogle unokufuna ukubuyela kwicandelo leprimiyamu kwaye athathe umlo uye kubafo abakhulu. Kule meko, kufanelekile ukuba silindele ixabiso kuluhlu lwe- $ 899-999.
Kwelinye icala, ukuba UGoogle uceba ukukhupha ifowuni esongekileyo ngo-2021, inkampani inokugcina amahashe ayo kwiiPixels eziqhelekileyo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ngamaxabiso abo. Kule meko, sithetha ngento ekufutshane ne- $ 799 yemodeli yesiseko sePixel 6. Kukho ukhetho lwesithathu, nalo. UGoogle unokufuna ukugcina i-699 yexabiso lentengo 'efikelelekayo' kunye nePixel 6 - iyadanisa ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, njengoko oku kuya kuguqulela kwi-specs zaphakathi kwebanga.
I-2020 yayingunyaka ophambeneyo, ngaphandle kwamathandabuzo, kodwa uGoogle ukwazile ngandlela thile ukubhengeza isibhengezo sikaPixel 5 kwifestile yeshedyuli yakhe. Yabhengezwa ngokusesikweni nge-30 kaSeptemba kwaye yaqala ukuthengiswa kwinyanga kamva. Ukujonga kwakhona kwiifowuni zokuvula iifowuni zePixel sifumanisa ukuba uGoogle uyahambelana nemihla kwaye kufanelekile ukuba silinde ifowuni yePixel 6 ukuba ivele ngo-Okthobha u-2021.
Kwakukho amarhe esipapasho sokuqala sika-Matshi (ngokucacileyo ayenzekanga) kunye nokukhululwa okunokwenzeka ehlotyeni, kodwa okwangoku akukho lwazi luxhasa le rumor nokuba yeyiphi. Akukho sizathu sokulindela ukuba iPixel 6 ityhilwe kuyo UGoogle I / O. , ezenzeka ngoMeyi 18-20, nokuba.
Iifowuni zikaGoogle Pixel zisungula imbali
Pixel-Oktobha 4, 2016
Pixel 2-Oktobha 4, 2017
Pixel 3-Okthobha 9, 2018
Pixel 4-Oktobha 15, 2019
Pixel 5-Septemba 30, 2020
I-Qualcomm sele isungule i-chipset yayo elandelayo-i-Snapdragon 888 . Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba siza kuyibona le silicon ngaphakathi kwePixel 6 kubonakala ngathi akunakulindeleka. Ukuvuza kwamva nje kuye kwafumana amandla, kusinika into yesithathu enokwenzeka, kwaye okwangoku, imeko enokubakho yeSoC kwiPixel 6. Sithetha I-chip eyenziwe nguGoogle enekhowudi yeWhitechapel , eyaziwa ngaphakathi njenge 'GS101'.
I-chip yokuthengisa iya kunika uGoogle izibonelelo zokusebenza, njengoko ivumela ulawulo ngakumbi kwizixhobo kunye nokudityaniswa okungqongqo kwenkqubo yokusebenza. Nangona kunjalo, amarhe amva nje kunye nokuvuza kuqikelela ukuba i-chip yeWhitechapel ayizukuphuthuma kuneSpapdragon 888.
Siyazi ukuba i-Pixel 6 iya kuthi ibonise i-sensor yeminwe engaphantsi kwemiboniso, eyokuqala kwifowuni kaGoogle, kwaye ikhamera yangaphambili inamahemuhemu okuxhasa ukurekhodwa kwevidiyo ye-4K. Okwangoku, uninzi lweempawu zePixel 6 azikaziwa.
Olunye uphawu lombuzo olukhulu luxhonywe ngaphezulu kwesiboniso kunye nenqanaba lokuhlaziya. Iiphaneli zokuhlaziya eziphakamileyo ziye zaba luphawu lwango-2020 kwaye amathuba okuba uGoogle angakhetha ubuncinci iphaneli ye-90Hz yePixel 6. Nokuba inkampani iya kuphuma inike i-120Hz okanye inqanaba lokuhlaziya eliphezulu kwisikrini sayo esilandelayo ayisiyiyo icace okwangoku. Silindele ukuba umthamo webhetri ubuncinci ube yi-4,000 mAh-ngokuhambelana nemodeli yePixel 5. Ukuba uGoogle utsibela kwi-chipset enamandla kakhulu, sinokubona ukungqubeka kuloo ndawo, nathi kodwa akunakulindeleka. I-Pixel 6 iya kuqhayisa nge-8GB / 128GB RAM efanayo kunye noqwalaselo lokugcina njengangaphambili.
UGoogle ukhethe umzimba we-aluminium e-hybrid 'enolusu' oluncinci olwenziwe ngeplastiki ekhethekileyo ye-bioresin yePixel 5 kwaye le combo yanika ifowuni ukubonakala okucocekileyo kunye nesitayile. Usapho lwePixel 6 nangona kunjalo, luya kudlala uyilo olwahluke ngokupheleleyo kunye nemibala.
Funda kwakhona: Iflegi kaGoogle Pixel 6 kunye nePixel 6 Pro evuzayo yoyilo olutsha
I-Pixel 6 inamahemuhemu okuba ne-6.4-intshi ye-AMOLED isiboniso ngokuthelekiswa ne-6.7-intshi egobileyo ye-AMOLED eboniswa kwiPixel 6 Pro. Imodeli yePro iya kuthi yamkele iphaneli yokuhlaziya ye-120Hz, ngelixa iVanilla Pixel 6 iya kuba nomboniso we-90Hz.
UHLAZIYO:UJon Prosser, uSteve Hemmerstoffer kunye nezinye iitipsters kunye neleaker baveze uyilo lwePixel 6 kunye nePixel 6 Pro kwaye kunye notshintsho olukhulu xa kuthelekiswa nesizukulwana esidlulileyo. Inomboniso wekhamera onomdla, okanye kufuneka sithi umcu, oqhubeka nobubanzi beefowuni. Kukho & iapos; s kwakhona uyilo lwepapaya orenji ngaphezulu, ngelixa isithuba esiphantsi kwenkqubo yekhamera singaphantsi kombala.
UGoogle unqabile ukudlala umdlalo wenombolo kunye neenkqubo zekhamera kwiifowuni zayo. I-Pixel 5 inenkqubo yeekhamera ezimbini ezinesimo esibanzi / sokusetha ngokubanzi. Singathanda ukubona ilensi yesithathu yongezwa kumxube kunye namathuba okuba kwenzeka ngePixel 6 ayisiyiyo leyo incinci, eneneni. I-Apple ilungiselela ukongeza iilensi ze-periscope zoom kwizixhobo zayo zothotho lwe-iPhone 13 (ngokutsho kwamahemuhemu amva nje), kwaye noGoogle angenza okufanayo.
(~ # ~) Hlaziya (~ # ~): Kubonakala ngathi uGoogle ekugqibeleni uza kusebenzisa inzwa entsha kunye enkulu yekhamera ephambili. Ukuvuza okuthe kratya icebisa ukuba esi sixhobo siza kuba nenzwa yokuqala ye-50MP, iyunithi ye-engile ebanzi, kunye neelensi yeselfowuni ye-8MP ngenkxaso ye-5x Optical zoom. Sivile ngoku ukuba ikhamera ye-selfie izakuxhasa ukurekhodwa kwevidiyo ye-4K.
umsinga kumzekelo 8 kaJava
Imoto endala yeMoto G4 kuthiwa ifumana uhlaziyo oludala lwe-software
Ungayibuyisela njani kwakhona i-smartphone (i-Android, i-iPhone kunye nesifundo seFowuni yeWindows)
Eyona meko yesikhumba ye-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 +
Izandla ze-iPadOS 15-jonga izinto ezintsha!
I-BlackBerry App World version 2.1.1.2 ilungele ukukhutshelwa